Hetsika fizahan-tany 5 any Auckland | Vaovao momba ny dia
Hetsika fizahan-tany 5 ao Auckland
Mariela Carril | | Auckland, mpitarika
Androany dia mitety ny faritra hafa amin'izao tontolo izao isika, mankany amin'ny tsara sy lavitra New Zealand. Na dia ny renivohitr'ity firenena ity aza dia Wellington, ny tanàna malaza indrindra ao aminy, miaraka amin'ny olona marobe monina ao aminy ary ny ivon'ny fitantanam-bolam-panjakana Auckland.
I Nouvelle Zélande dia misy nosy roa, ny North Island sy ny South Island, ary Auckland dia ao amin'ny Nosy Avaratra ary izy dia iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra eto amin'ity faritry ny Pasifika ity. Raha mbola tsy fantatrao loatra ny momba ny firenena sy ity tanàna ity, dia soso-kevitra izahay hanombohanao amin'ity lahatsoratra ity ary amin'ny farany dia hampiditra azy ireo ao amin'ny lisitry ny dia ho avy ianao. Toerana fitsangatsanganana tsara io!
1 Zava-mahasarika any Auckland
2 Mandeha any anaty nosy volkano
3 Tsidiho ny morontsirak'i Auckland
4 Miampita ny firenena mandritra ny dimy ora an-tongotra
5 Tsidiho sy zahao ny Nosy Rotoroa
6 Tsidiho ny zanatany penguin lehibe indrindra eto an-tany
Zava-mahasarika any Auckland
Ny tanana eo amin'ny isthmus izy, eo anelanelan'ny havoana sy eo anelanelan'ny sisa amin'ireo volkano 48 maty, seranan-tsambo, farihy, nosy ary bay voajanahary. ANKAFIZO vanin-taona mafana miaraka amin'ny maripana izay mahalana mihoatra ny 30 ºC, ary ririnina malefaka ary tsy dia mangatsiaka be. Eny tokoa, avy be ny orana mandritra ny taona fa mbola mahavita antonony ihany tanàna izay misy tara-masoandro maro.
Any amin'ny tontolo mahafinaritra toy izany ny toerana tena fizahantany dia manodidina ny hetsika ivelany Ka hifantoka amin'izany isika:
Mandeha any anaty nosy volkano
Ny kayak dia hofaina ary hitondra kayody sy palitao aina. Ny hevitra dia mankanesa any amin'ny Nosy Rangitoo, nosy volkanika na volkano mandry tsy lavitra ny afovoan'i Auckland. Rehefa manofa ny kayak dia omenao lalana kely ihany koa miampita ny seranan'i Waitemata ary aza adino ireo penguin manga, ohatra, izay mampiala voly kokoa ny dia. Mazava ho azy fa manana mpitari-dalana ianao izay mitarika ny vondrona mpitsangatsangana. Tsy mila miahiahy!
Nosy Rangitoto no nosy lehibe indrindra ary kely indrindra amin'ireo nosy volkano manodidina ny tanàna. Manana dia adiny iray mankany an-tampony ianao, avy any amin'izay mahafinaritra ny fomba fijery, 360º. Fahagagana. Miverina any amoron-dranomasina sakafo atoandro dia tafiditra ao amin'ny fitsidihana. Ity fitsidihana androany ity dia mitentina $ 185 NZ dolara ary miala amin'ny 4 hariva vao miverina amin'ny 10:30 alina ihany. Raha liana amin'ilay fitsangatsanganana ianao dia soraty ireto fampahalalana ireto:
Auckland Sea Kayaks, Tamaki Drive 384, St. Heliers, Auckland. Misokatra manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 7 hariva ny fivarotana ary manana tranokala hifandraisana.
Tsidiho ny morontsirak'i Auckland
Auckland Izy io dia manana morontsiraka mahafinaritra sy volamena any amin'ny morontsiraka atsinanana ary amin'ny morontsiraka andrefana dia misy torapasika velona kokoa, miaraka amin'ny fasika mainty mety amin'ny surf. Afaka mankafy ny masoandro ianao amin'ny maraina amin'ny voalohany ary amin'ny tolak'andro amin'ny alina amin'ny faharoa.
Mankany avaratra dia miditra amin'ny faritry Matakana ianao ary eo dia mihazakazaka mankao amin'ilay Morontsiraka Omaha, Tawharanui ary Pakiri. Izy ireo no be mpitsidika indrindra amin'ny fahavaratra. Eo anelanelan'ny Matakana sy Auckland dia misy morontsiraka telo kilometatra lava, tsara ho an'ny filomanosana ary misy hetsika rano be, antsoina hoe Orewa.
Avy eo amin'ny morontsiraka atsinanana afovoan-tanàna dia ny Morontsiraka Pohutukawa miaraka amin'ny morontsirak'i Omana sy Maraetai. Na te-hivezivezy ianao, hilentika na hijery fitsangatsanganana fotsiny ireo mpitari-dalana dia ireo no tanjona tsara indrindra.
Miampita ny firenena mandritra ny dimy ora an-tongotra
Firenena iza no miampita avy amin'ny morontsiraka ka hatramin'ny morontsiraka ao anatin'ny dimy ora? Nouvelle Zélande, eo amin'ny havoanan'i Auckland. Amin'izay fotoana izay ve tery ny firenena ka afaka miala amin'ny morontsiraka iray mankany amin'ny morontsiraka hafa afaka adiny dimy fotsiny. Ny fitsangatsanganana dia manomboka any amin'ny Harbour Viaduct, any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Auckland, mamakivaky ny faritra an-tanàn-dehibe, ny valan-javaboary ary ny volkano tsy mandry mba hamita Làlana 16 kilometatra ao amin'ny Port of Manukau, amin'ny ilany andrefana.
Ny làlana dia mamaky ny campus ao amin'ny University of Auckland, dobo taloha miaraka amin'ny ganagana, ny Winter Gardens malaza, ny Auckland Museum, Mount Eden, ilay volkano tranainy indrindra ao an-tanàna amin'ny 196 metatra ny haavony, amin'ny alalàn'ny sarotra Maori taloha sy ireo toerana misy ifandraisany ihany koa. hatramin'ny tantaran'ny fanjanahantany ihany koa.
Misy fambara manondro ny lalana ary ny rano sy ny sakafo ihany no tsy maintsy entinao. Ary kiraro ahazoana aina.
Tsidiho sy zahao ny Nosy Rotoroa
Nisokatra ho an'ny mpitsidika ny nosy tamin'ny 2005. Izy io dia paradisa voajanahary izay nakatona nandritra ny taonjato iray manontolo ka raha any Auckland ianao dia aza hadino ny mitsidika azy. Tonga amin'ny sambo avy any afovoan'i Auckland, an-tongotra 75 minitra, ary rehefa tonga ianao dia manana tambajotran'ny lalana, tranobe manan-tantara ary morontsiraka mahafinaritra.
Anisan'ireo tranobe ireo ny trano fiangonana taloha, fonja, sekoly iray, nivadika ho a tranombakoka sy foiben'ny fampirantiana. Mirefy 82 hektara izy io ary milaza amintsika ny tantara fa ny Tafiky ny famonjena dia nividy azy io tamina fianakaviana iray nanana azy io hananganana ivon-toerana famelomana zava-mahadomelina sy toaka manokana ho an'ny lehilahy.
Nikatona io ivon-toerana io tamin'ny taona 2005 sy 2008, izay nanomboka namboarina indray ireo trano ary naverina tamin'ny laoniny. Tamin'ny 2010 dia teo am-pelatanan'ny tanàna izy io ary tamin'ny 2011 dia nisokatra ho an'ny besinimaro izy io. Ny nosy Misokatra manomboka amin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany izy io fa ny trano kosa misokatra manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 5 hariva.
Tsidiho ny zanatany penguin lehibe indrindra eto an-tany
Azonao atao izany ao amin'ny SEA FIAINANA Aquarium Kelly Tarlton. Ho hitanao koa ny dragona, ny stingray, ary antsantsa maro dia maro. Azonao atao ny mahita ny fomba fahanany sy ny fahitana antsantsa akaiky miaraka amin'ny hetsika antsoina hoe Shark Dive Xtreme ary iray hafa antsoina hoe Shark Cage. Ao amin'ny aquarium dia misy fampirantiana 30 eo ho eo miaraka amin'ny biby velona, ​​samy ao amin'ny toeram-ponenany avy. Raha mividy ny tapakila amin'ny Internet ianao dia andoavanao 31 dolara Nouvelle Zélande.
Ranomasina, fiainam-biby, mandeha, mandeha an-dranomasina. Izay rehetra azontsika atao ao Auckland dia tsy izany ihany, maro ny nosy, misy ny tranombakoka, misy ny mandeha, misy ny bara sy trano fisakafoanana Manampy ireo zavatra ataontsika antoandro rehefa milentika ny masoandro amin'ny farany, mirehitra ny jiro ary mivoaka hankafy ny alina ny olona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Auckland » Hetsika fizahan-tany 5 ao Auckland
Fampiharana 6 hiadiana amin'ny adin-tsaina manidina